कोडिङ सुरु गर्दै हुनुहुन्छ ? पाइथनबारे थाहा पाइराख्नुहोस् यस्ता कुरा - Tech News Nepal Tech News Nepal
शनिबार, फाल्गुन १, २०७७ १६:३५
कोडिङ सुरु गर्दै हुनुहुन्छ ? पाइथनबारे थाहा पाइराख्नुहोस् यस्ता कुरा
काठमाडौं । पाइथन अहिलेको लोकप्रिय प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो, जुन आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्सको वृहत क्षेत्रभर प्रयोग हुन्छ । डिजिटल रुपान्तरणको यो युगमा एप्लिकेसन डिजाइन गर्न सक्ने क्षमता भएका जनशक्तिको माग उच्च छ ।
यसैले आज हामीले पाइथन ल्याङ्ग्वेजबाट करियर बनाउन चाहानेहरुका लागि आवश्यक महत्वपूर्ण जानकारीहरु जस्तै तलब, प्रोग्रामिङ एप्लिकेसन, अध्ययन गर्नुपर्ने कोर्षहरु, डेभलपरको भावनाका बारेमा बताउँदै छौं ।
टीआईओबीईले प्रत्येक महिना आफ्नो शीर्ष लोकप्रिय प्रोग्रामिङ ल्याङ्वेजहरु सार्वजनिक गर्दछ । प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको उद्विकाशिल परिदृश्यमा लामो समय ट्रेण्डमा आउने ल्याङ्ग्वेजको र्‍याङ्कलाई यसले अद्यावधिक गर्दछ ।
टीआईओबीई (TIOBE) को जनवरीको र्‍‍याङ्किङ अनुसार पाइथन वर्षकै शीर्ष लोकप्रिय प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज बनेको थियो । पाइथनले यस्तो सम्मान पाएको यो चौँथो पटक हो ।
२०२० मा पाइथनले २.०१ प्रतिशत रेट प्राप्त गरेको थियो, जुन अन्य लोकप्रिय प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज सी प्लस प्लस र सीको क्रमश १.९९ प्रतिशत र १.६६ प्रतिशत भन्दा रहेको थियो ।
यस्तै टीआईओबीईको फेब्रुअरीको र्‍याङ्किङमा पाइथनले १०.८६ प्रतिशत रेटिङ प्राप्त गरेर तेस्रो स्थान हासिल गरेको थियो, जसमा सी सर्वाधिक रेटिङ र जाभा रनरपमा आएको थियो ।
‘आजको समयमा मसिन लर्निङ, एआई र डेटा साइन्समा पनि पाइथनकै वर्चस्व छ यसैले यी क्षेत्रमा पनि काम गर्न तपाईंसँग पाइथनकै ज्ञान हुनुपर्दछ ।’